Mayelana NATHI: I-APLUS Global Ecommerce
Isevisi yokudlulisa izikhalazo ye-Amazon
Isikhalazo sokumiswa kwe-Amazon
Ukuvikelwa Kokumiswa Komthengisi we-Amazon
Ukuhlolwa Kwezempilo Kwe-akhawunti
Ukuqina Kokuthengisa kwabathengisi be-Amazon
Ithimba labachwepheshe abanomdlandla abanamakhono afanelekile emakethe lenza inhliziyo nomphefumulo we I-Aplus Global Ecommerce. Sikholelwa ekwakheni indawo echumayo ye-e-Commerce, ukusebenza usuku nosuku, kanye nosuku lokuphumula ukuze sinikeze izinsizakalo ezihamba phambili kumakhasimende. Sihlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili zokubuyiselwa kwe-akhawunti yabathengisi be-Amazon.
Inkampani ebheka indawo yebhizinisi enempilo, izimakethe ezincintisanayo, nezwe elihlala lichuma, i-A Plus Global e-commerce ingenye yendawo yayo lapho amabhizinisi aku-inthanethi esizwa ukuthi asebenze kahle. Sinikezela ngezinsizakalo ezingama-360 ° ezinkampanini ze-e-Commerce. Ukusuka ekusizeni amabhizinisi e-Commerce abe ne-akhawunti yomthengisi enempilo ukuthola ukubuyiselwa kwe-akhawunti yabathengisi be-amazon, sinezixazululo zabo bonke. Inhloso ukusiza amabhizinisi kuphela ukuthi akhule ezimakethe ezinjenge-Amazon kodwa futhi nokwakha indawo yawo emhlabeni we-e-commerce. Sizama ukuletha amabhizinisi ngokulingana nezindlela ezanda ngokushesha zomhlaba we-e-Commerce futhi sihlole okuningi. Izinsizakalo zethu zihamba phambili emakethe okwenza i-A Plus Global ibe ibhizinisi elithembekile. Sineqembu labantu abakhethwe ngesandla abavela ezizindeni ezahlukahlukene futhi abanamakhono obuchwepheshe afunwa kakhulu emakethe. Ubuqotho nokuzinikela kwabo kunezela inani elikhulu ezinsizakalweni, futhi leyo yi-USP ye-A Plus Global e-Commerce. Izinsizakalo zethu eziqinisekisiwe zamahora angama-24 zokubuyisela ama-akhawunti Womthengisi we-Amazon ziyaziwa. Izinsizakalo zokukhuthaza ezokuthengisa nezama-akhawunti nazo kufanelekile ukuthi zizanywe. Ukumboza izinsiza ezahlukahlukene, sisebenza nawe emikhakheni emine ebanzi:
Isevisi yokudlulisa izikhalazo ye-Amazon - sisiza ukukuthengisa futhi kungakapheli amahora angama-24
Impilo ye-akhawunti yomthengisi - sigcina impilo ye-akhawunti yakho ingaphansi kwemikhawulo ngobuchwepheshe bethu
Ukusekelwa kwezebhizinisi nokuthengisa - sikusiza ukuthi ukhule, hhayi ukuxhasa kuphela
Ukuthuthukiswa kwewebhusayithi nohlelo lokusebenza- sikunikeza ipulatifomu yakho yokwenza
Sinikeza izinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso namaphakeji afaneleka kakhulu kusidingo sakho, ahlanganiswe nezinqubomgomo zesizinda esifanele. Ukulungiselela isisekelo samakhasimende esisakazeke emhlabeni wonke, i-A Plus Global inikeza ngezinsizakalo ezidingeka kakhulu njenge- “Amazon Sellers Account Reinstatement” edingwa yi-akhawunti yakho yomthengisi ngokuzinikela, ubuchwepheshe, kanye nokusebenza kahle kwethimba lethu.
I-642 N Highland Ave, Los Angeles,
© Wonke Amalungelo Agodliwe
Imininingwane © 2021 AplusGlobalEcommerce
Xoxa nochwepheshe wethu
Sawubona, Ngingakusiza kanjani?